Tag: BMW logo | Martech Zone
Kuona kunoonekwa kwakakosha kupfuura vanhu vazhinji vanotenda. Chiratidzo hachimiriri mucherechedzo chete, chinowanzove nezvakawanda zvinoreva uye chinogona kana kutsvaga nhoroondo yekambani. Makambani mazhinji anopokana nekuchinja logo. Vanogona kunge vakashandisa mari yakawanda yekumaka, kana ivo vari kunetsekana nemutengo uye nesimba rinodiwa kana uchidzokororazve. Ini ndiri mutendi akasimba mukuita shanduko kune yako logo kuti uchengete zvese zviri zviviri
Ivo vanhu paThe Logo Kambani vanobvunza Inofanirwa kuti Logo ive isingagumi? Kwete.Logos haisi yekungove isingakanganwike graphic kana kutaridzika kwechiratidzo chavanomiririra, ivo zvakare vanoenderana zvakanyanya nesvikiro ravanoonekwa kwariri uye tekinoroji yekuzviona. Chiratidzo chemotokari chakadhindwa, pawebhu, uye pamotokari… saka chinofanirwa kuve chakagadzirirwa ivo vaviri kuve mumiriri wechiratidzo uye chinotaridzika nenzira inoenderana
Simba reMakumi maviri nerimwe Gwaro reIzwi
Muvhuro, Nyamavhuvhu 29, 2011 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Pakupera kwevhiki, ini ndakachinjisa rangu reWordPress theme kudzokera kuna Makumi maviri negumi nerimwe. Ini ndinogona kutaura pachokwadi kuti ndiri kufara nedesheni izvozvi. Ndakaigadziridza zvandinofarira uye ndaisatombofanira kubata iyo kodhi. Zvino usandibata zvisirizvo, pane dzimwe nguva apo ini ndinofarira kudhiraivha mukati medingindira uye kubiridzira mari yacho mairi, asi blogging yakaoma zvakakwana sezvazviri. Ini handidi chero kushushikana kwakawedzerwa